बिचार विश्लेषण Archives - Page2of 54 - Tamang Online
छ महिनाअघि चीनबाट कोरोना शुरू हुँदा मानवताको नाताले जागेको समवेदना त थियो नै, तर आफूतिर सोझिएको चिन्ता थिएन । चीनमा हायलकायल जारी राख्दै र अन्य छिटफुट देशमा आफ्नो शक्ति देखाउँदै कोरोना एकाएक युरोप, अमेरिका हानियो । उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधासहित विकास र समृद्धिको चरम स्वाद चाखिरहेका युरोपेलीको जनजीवनसमेत तहसनहस पार्न उसलाई धेरै समय लागेन । तीव्र रूपमा फैलिएको संक्रमणसंगै ज्यान गुमाउनेको सख्या बढिरह्यो । उच्च गतिको संक्रमण र सोही अनुपातको मृत्युश्रृङ्खला
समाजमा व्याप्त जातीय विभेद र यसको प्रताडनाको प्रतिक्रियामा संसारभरि महिला र पुरुष दुई जात मात्रै छन् भनिन्छ । गौतम बुद्धले भने मानव जाति एउटै मात्र रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार महिला र पुरुष एउटै जातका दुई लिङ्ग मात्रै हुन् । जसरी जनावरहरू गाई, भैंसी, घोडा, गधा आदिमा जातीय भेद देखिन्छ त्यसरी मानिसमा देखिंदैन । जनावरमा त्यो भेद देखिए पनि उनीहरूले देखिने गरी विभेद गरेको थाहा पाइँदैन । मानिसमा भने
शम्भु श्रेष्ठ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ६ गते बुधबार संघीय संसदमा सम्बोधन गर्दै ‘सत्यमेव जयते’ शब्द उच्चारण गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नेपालको भू-भागलाई समेटेर नयाँ नक्सा पास गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको भू-भाग फिर्ता लिएरै छाड्ने प्रतिवद्धता संसदमा दोहो-याएका छन् । संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भारतको प्रतिक चिन्हमा चारतिर फर्किएका सिंहको आकृति छन् । त्यसको मुनि ‘सत्यमेव जयते’ लेखिएको छ । म यसपटक भारतलाई
याम्बु । सीमाविद्का अनुसार ब्रिटिस सरकारले सन् १८१६ देखि १८५६ सम्म १२ वटा नक्सा र चीनले १९०३ र १९२१ मा बनाएका दुई वटा नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभागका रूपमा रहेको थियो । सो नक्सामा कालीनदीको शिर लिम्पियाधुरा नै प्रस्ट थियो । भारतले कुवा र खोल्सा बनाएर कालीनदी भनेर अर्कै मानेको विषय नक्साबाट स्पष्ट हुने सीमाविद् हेमन्त सेढाईंको दाबी छ । ‘भारत आफैंले बनाएको नक्सामा लिम्पियाधुरा आसपास क्षेत्र विवादित भनेको छ ।
– एनी तामाङ हरेक रातपछि बिहानी आउँछ । हरेक समस्यामा समाधान लुकेको हुन्छ । आशा गरौं अहिले विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको अन्त्य पनि चाँडै हुनेछ । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पालना गरौं । अहिलेको लागि शारीरिक रुपमा सामाजिक दुरी कायम राख्नु नै कोरोनाको संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने उपाय ठहरिएको छ । तर यो लकडाउनको समय पट्यार लाग्दो छ । तनावपूर्ण छ । के गरेर समय बिताउने ? हामी मध्ये
चैत्र २२- यतिबेला कोरोना भाइरसदेखि बिश्व मानव समुदाय डर र त्रासको बीचमा घरघरमा लुकिरहेको छ । हामी सबैलाई लागेको छ, कति दिन हामी घरभित्र लुकेर बस्नु पर्ने हो ? यसको अन्त्य कहिले होला ? कसैले भन्छन्, यो भाइरस अप्रिल महिनासम्म सक्रिय रहनेछ । त्यसपछि यो बिस्तारै कम हुँदै जान्छ । कोरोना भाइरस ३० डिग्रीभन्दा बढी गर्मीमा बाँच्न नसक्ने चिकत्सकीय तथ्यको कोणबाट यसखालको अनुमान हामी गरिरहेका छौ । तर मलाई यो
-साङमो थोकर तामाङ कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) भन्ने महामारी पहिला शुरुमा चीनको हुबेई प्रान्तको बुहानमा पत्ता लागेको करिब तीन महिनाकै अवधिमा संसारभरि फैलिएको छ । मैले लेख्ने बेलासम्म www.worldometers.corono अनलाइनको अनुसार बिश्वको २०३ देशमा यो महामारी फैलिरहेको छ । बिश्वमा यसको संक्रमण मैले लेख्दालेख्दै ९,३७,१६७ जनालाई संक्रमित भएको, त्यसमा १,९५,१४३ जनाको उपचार भएर निको भएको स्थिति छ भने ४७,२६७ जनाले ज्यान गुमाई सकेको छ । अमेरिकमा सबैभन्दा बढी संक्रमित (२,१४,३४४ जना)